SIDA LOO DHIGO SHAHAADADA EREYGA - EREY - 2020
Ugu Weyn Ee Erey
Calaamadda digrii ee Celsius ku qor dokumentiga Microsoft Word
Xulashada walxo kala duwan ee Photoshop waa mid ka mid ah xirfadaha ugu muhiimsan marka la shaqeynayo sawirada.
Asal ahaan, xulashadu wuxuu leeyahay hal gool - walxaha la gooyo. Laakiin waxaa jira xaalado kale oo khaas ah, tusaale ahaan, buuxinta ama xoqidda wareegyada, abuurista muuqaalo, iwm.
Casharkani wuxuu kuu sheegi doonaa sida loo doorto walxaha ku yaal mawduuca sawirka Photoshop iyadoo la adeegsanayo tusaalayaal farsamooyin iyo qalabyo badan.
Habka koowaad ee ugu fudud ee xulashada, taas oo kaliya ku habboon xulashada walax hore loo jaray (laga soocayo asalka) - riix maskaxda xadka lakabka leh furaha muhiimka ah CTRL.
Ka dib markii ficilkan la sameeyo, Photoshop waxay si toos ah u qaadaan aagga la xushay oo leh shay.
Marka xigta, hab fudud oo aan sahlanayn waa isticmaalka qalabka. "Muuqaal maskaxeed". Habka loo adeegsado walxaha ku jira hal-abuurkooda ama sida hadhuu u dhow.
Gaariga digriiga ah wuxuu si toos ah ugu dhex wareegi karaa aagga la xushay aagga ay ku jirto huurada la riixay.
Wanaagsan in la kala saaro walxaha ka soo jeeda asaasiga.
Qalab kale oo kooxdan ka mid ah waa "Xulasho degdeg ah". Waxay doortaan shey, qeexaya xuduudaha u dhexeeya tayada. In ka yar raaxo badan "Muuqaal maskaxeed", laakiin waxa ay suurtogal u tahay in la xushmeeyo shayga oo dhan, laakiin kaliya qaybtiisa.
Qalabka kooxda "Lasso" kuu oggolaanaya inaad xulato walxaha midab kasta oo ka mid ah midabka iyo muuqaalka, marka laga reebo "Magnetic Lasso"oo ka shaqeeya xuduudaha u dhexeeya tayada.
"Magnetic Lasso" "rlues" xulashada xuduudda shayga.
"Cadaadiska Lasso"maadaama ay ka caddaato magaca, waxay u shaqeeyaa kaliya khadadka tooska ah, taas oo ah, ma jiraan wax suurtagal ah in la abuuro asaasado muuqaal ah. Si kastaba ha ahaatee, qalabku waa u fiican yahay xulashada geesaha iyo waxyaabaha kale ee leh dhinacyo toosan.
Caadiga "Lasso" wuxuu si gaar ah u shaqeeyaa gacanta. Markaa, waxaad dooran kartaa aag kasta oo qaab iyo baaxad.
Dhibaatada ugu weyn ee qalabkan waa saxnaanta hoose ee xulashada, taas oo keeneysa tallaabooyin dheeraad ah marka la gaaro dhamaadka.
Wixii xulasho sax ah ee sawirada Photoshop, qalab khaas ah oo la yiraahdo "Feather".
Iyada oo caawimaadda "Pera" Waxaad abuuri kartaa dulucaad kasta oo adag oo weli edeb leh.
On xirfadaha la shaqeynaya qalabkan, waxaad akhrin kartaa maqaalkan:
Sida loo sameeyo sawir vektor ah ee Photoshop
Qalabka "Muuqaal maskaxeed" iyo "Xulasho degdeg ah" ku haboon in lagu muujiyo walxaha monochromatic.
Qalabka kooxda "Lasso" - shaqada gacan qabashada.
"Feather" Waa qalabka xulashada ugu saxsan, taas oo ka dhigeysa mid aan lagama maarmaan u ah la shaqaynta sawirrada adag.
https://termotools.com so.termotools.com © Erey 2020